Kalsoonida Stefan Löfven ee Dadweynaha Sweden oo Korortay Mudada Coronaha lagu jiray Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaKalsoonida Stefan Löfven ee Dadweynaha Sweden oo Korortay Mudada Coronaha lagu jiray
Kalsoonida Stefan Löfven ee Dadweynaha Sweden oo Korortay Mudada Coronaha lagu jiray
December 26, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Kalsoonida lagu qabo Ra’iisul Wasaaraha Stefan Löfven ayaa kordhay xilligii deyrta, in kasta oo mowjad labaad oo Corona ah ay dib u soo laabteen.
Isugeyn boqolkiiba 38 jawaabeyaasha Demoskop’s / Aftonbladet ayaa sheegay inay kalsooni weyn ku qabaan raisalwasaaraha Sweddn sahankii ugu dambeeyay ee Oktoobar.
Ma jiro hogaamiye xisbi kale oo helay koror intaas la eg.
si kastaba ha noqotee, Raiisel Wasaaruhu lama tartami karo hoggaamiyaha Moderaterna Ulf Kristersson xagga sumcadda. Ilaa boqolkiiba 44 ayaa sheegaya inay dareemayaan kalsooni weyn ama aad u weyn Kristersson.
Ebba Busch Tor oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga Dimuqraadiga ayaa kaalinta labaad la wadaaga raiisal wasaare Löfven boqolkiiba 38. Waxay si dhow ula socdaan Jimmie Åkesson oo ka tirsan xisbiga Sverigedemokraterna 37 boqolkiiba.
Hogaamiyaasha kale ee xisbiyada, tirooyinka waa sida soo socota:
Annie Lööf (C) 24 boqolkiiba,
Per Bolund (MP) 18 boqolkiiba,
Nooshi Dadgostar (V) 15 boqolkiiba,
Isabella Lövin (MP) 14 boqolkiiba iyo
Nyamko Sabuni (L) 8 boqolkiiba.
Sahaminta waxaa ku jira jawaabaha dad ka badan 1,000 qof.